The Fun Of Bingo Halls│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ဂေါက်သီးလှည်း: ဂေါက်သီးကစားနည်း, သို့သော်အဘယ်သို့အခြားအသုံးပြုမှုအားလုံးကော?
The Green ကိုဖတ်ခြင်း
Picky-Overfished ဘေ့စ်အတွက် Drop-Shotting
6 အသုံးဝင်သောအွန်လိုင်း slot အချက်အလက်များ
ဆန်ဖရန်စစ္စကို 49ers မှာ Seattle Seahawks
This phrase is often repeated in nearly every sport ‘ keep your eye on the ball. It applies to golf too! If you do not watch the ball, then the chance that you will hit it is very slim! Keep your eyes focused on one part of the ball. Don’t watch your club as you swing. Keep your focus on the ball and let everything else fade into the background. Try to look down on the ball, rather than watching it at the end of the golf club. Raising your shoulders is not going to help you see the ball more clearly. If you will look down on the ball, you will get results that are more successful and you will not haveatendency to look up before the end of your swing. ကံမကောင်းစွာပဲ, it is completely natural to look away when you begin to pull the club back. Ignore the natural feeling and keep your eyes on the ball. When you are looking down at the ball, you should notice that the only way you can keep the club head in the correct line of flight is to keep your hands moving parallel to the flight line. Keep your hands in line with the club head when making contact with the ball. It is very important to learn to watch the ball no matter what kind of shot you need to make. It does not matter if the ball is in the long grass, the sand trap, onaslope, or anywhere else, the main thing is to see the ball completely so that you can hit it solidly and successfully. There are not many golfers who stand still and keep their attention on the ball. အကြိမ်များစွာ, people will look at where they want the ball to go and then look at the ball. Most golfers would be surprised to learn that they do not stand still and watch the ball. The instant that you take your eye off the ball, you begin having problems. Most golf mistakes arearesult ofaloss of concentration. It you keep your focus on the ball, you will be able to hit the ball well. To help your golf game, remind yourself to keep your eye on the ball for the entire swing. You will find your golf game improving so much that your friends may be asking you for advice! Watch The Ball!
လောင်းကစားနေစဉ်သင်လိုက်နာရမည့်ထိပ်တန်းလောင်းကစားခြင်းစည်းမျဉ်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်. လောင်းကစားတွင်ရေရှည်မဟာဗျူဟာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အကယ်၍ သင်သည်ပညာရှိရှိလောင်းကစားခြင်းနှင့်သင်၏နည်းဗျူဟာကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားပါကခရီးရှည်ကိုအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်. လူတွေဟာသူတို့မှာမရှိတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ကစားတဲ့အခါလောင်းကစားအတွက်အခက်အခဲတွေစတင်ကြုံတွေ့ရပြီး၊ သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါ. နည်းဥပဒေ #1- အနိုင်ရရှိခြင်းသည်မည်သည့်ပမာဏပင်ဖြစ်ပါစေအနိုင်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်. သင်တစ်နေ့တာအနိုင်ရသမျှသည်၎င်းကိုအနိုင်ရဟုယူမှတ်ပါ. ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် 50 ဒေါ်လာသို့မဟုတ် 50,000 ဒေါ်လာအနိုင်ရဘို့ကျေးဇူးတင်ဖြစ်. တောက်ပတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ၊ အနည်းဆုံးမင်းပိုက်ဆံမဆုံးရှုံးဘူး. နည်းဥပဒေ #2- သင်နှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်ပမာဏဖြင့်သာလောင်းကစားပါ. မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကသင့်အားအဆင်ပြေသည်ထက် ပို၍ ကစားခြင်းဖြင့်မည်သူ့ကိုမျှဖိအားမပေးပါစေနှင့်. သင်၏သက်တောင့်သက်သာရှိဇုန်ပြင်ပတွင်လောင်းကစားကိုစတင်သောအခါအမှုအရာသည်အန္တရာယ်များလာသည်. ဘယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်နေသည်. နည်းဥပဒေ #3- သင်ရှုံးနိုင်သောငွေနှင့်လောင်းကစားလုပ်ပါ. လောင်းကစားတွင်သင်၏အပေါင်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကားငွေပေးချေခြင်းကိုဘယ်သောအခါမျှမထားပါနှင့်. သင်က၎င်းနှင့်အတူလောင်းကစားမတတ်နိုင်လျှင်သင်လောင်းကစားမဖြစ်သင့်ပါတယ်, ကာလ. နည်းဥပဒေ #4- ဘယ်အချိန်မှာနုတ်ထွက်ရမယ်ဆိုတာသိပါ. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်ခွာရမည်ကိုသင်သိသင့်သည်. ဥပမာအားဖြင့်ငါရှုံးမယ်ဆိုရင်မင်းပြောနိုင်မှာပါ 100 ဒေါ်လာငါတစ်နေ့တာနုတ်ထွက်လိမ့်မယ်ငါအနိုင်ရမယ်ဆိုရင် 500 ငါဒီနေ့အတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိမ့်မယ်. သင်၏လောင်းကစားကန့်သတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်၏ကစားပွဲများကိုမလိုက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်. နည်းဥပဒေ #5- သင့်ရဲ့ဂိမ်းကိုလေ့လာပါ. တကယ်လို့သင်ကအနိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကစားနေတဲ့ဂိမ်းတိုင်းရဲ့အလေးသာမှုကိုလေ့လာသင့်သည်. သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ဂိမ်းကိုလေ့လာခြင်းသည်မကောင်းသောလောင်းခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီသည်. ဤအရာများသည်လိုက်နာရမည့်ထိပ်တန်းလောင်းကစားနည်းဥပဒေအနည်းငယ်ဖြစ်သည်. အနိုင်ရသူများအတွက်လောင်းကစားစည်းကမ်းများ
တောင်ပစိဖိတ်ဒေသသည် ရေများပေးစွမ်းနိုင်သော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံများကြောင့် လူသိများသည်။. ၎င်းသည် စွန့်စားမှုများနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ခရီးသွားများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်ပင် ကျော်ကြားခဲ့သည်။. နွေရာသီနီးကပ်လာသောအခါ တံငါသည်များစွာသည် နယူးဇီလန်သို့ လာကြသည်။. တူနာငါးနှင့် ဘေ့စ်ငါးတို့သည် ပူနွေးသောနေရာကိုရှာရန် ကမ်းခြေများအနီးတွင် ကူးခတ်ရသောရာသီဖြစ်သည်။. ကျန်ခုနစ်လတာကာလအတွင်း, အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီအပြီး လများတွင် တံငါသည်များအတွက် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။. တောင်ပစိဖိတ်ဒေသ၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ခရီးစဉ်များကို ခံစားရန် သင်ယူဆောင်လာရန် အရာများစွာ မလိုအပ်ပါ။. မင်းလိုအပ်သမျှက မင်းရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ ဦးထုပ်တွေ ချွတ်လိုက်. ကဗျာ, ဆော်လမွန်ကျွန်းများ, Tonga နှင့် Niue တို့သည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်သော နေရာများဖြစ်သည်။. ဤနေရာများသည် ငါးများပေါများပြီး ရာသီဥတုကြောင့်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသော ငါးဖမ်းအပန်းဖြေနေရာများတွင် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။. ဤနေရာများတွင် ငါးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော အပူချိန်များရှိသည်။, ဤနေရာများတွင် ငါးများ ပေါများရခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြသည်။. ဤနေရာများတွင် ငါးဖမ်းခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမှ မရှုပ်ထွေးပါ။. မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုင်တွယ်မှုနဲ့အတူ ရွက်ငါးနဲ့ mahi-mahi ကိုတောင် ပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။. Sailfish သည် နေရောင်အောက်တွင် လွင့်ပျံနေသော ရွက်လွှင့်များဖြင့် ၎င်းတို့၏ လေဘာသဏ္ဍာန်ကြောင့် ကျော်ကြားသည်။. တောင်ပစိဖိတ်ဒေသမှာလည်း နွားကြီး mahi-mahi က မင်းကို ဆွဲဆောင်နေတာတွေ့ရမှာပါ။. စွန့်စားသူများအတွက်, ဒါကလည်း သင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။ “poppers” ပြီးလျှင် dogtooth တူနာ သို့မဟုတ် trevally ကို ကြိတ်လိုက်ပါ။. ဤဟော့စပေါ့များသည် ၎င်းတို့ဖမ်းယူထားသည့်အရာကို ချက်စားချင်သူများအတွက်သာမက ဟင်းချက်တတ်သူများအတွက်ပါ ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ “ဖမ်းပြီး လွှတ်ပေးပါ။” ဒphilosophန. ဂိမ်းကစားသည့် တံငါသည်များသည် များသောအားဖြင့် ရွက်ငါးဖမ်းကြသည်။, မြောက်ပိုင်းအပြာရောင် တူနာငါး, မာလင်, ငါးကွမ်းရှပ်, ဧကရာဇ်နီ, Trevally နှင့် Cod. သင်ဟာ ယင်ကောင်ငါးဖမ်းရတာကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ပါ။, ချောင်းငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ရေပြာငါးဖမ်းခြင်း။, ထို့နောက် တောင်ပစိဖိတ်ဒေသသည် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။. သင်ဟာ ကျွမ်းကျင်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစပြုသူပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ငါးဖမ်းလမ်းညွှန်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးရှိတဲ့ လှေတွေ အများကြီးရှိပြီး ဘေးကင်းပြီး အကောင်းဆုံးငါးဖမ်းအတွေ့အကြုံကို ရရှိစေမှာ သေချာပါတယ်။. ပျော်ရွှင်စွာနှင့် သင်၏ငါးဖမ်းခရီးစဉ်တွင် အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် အားကစားငါးဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အထူးဂိမ်းငါးဖမ်းလှေကို ငှားရမ်းရန် အကြံပြုထားသည်။. ဂိမ်းငါးဖမ်းခြင်းနှင့် အားကစားငါးဖမ်းခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးသည် ဤနေရာများတွင် ရေပန်းစားသည်။. ဤဂိမ်းများသည် ချမ်းသာသူများသာ ကစားခဲ့ကြသော်လည်း ဤနေရာများတွင် မည်သူမဆို ကစားနိုင်သော ဂိမ်းများဖြစ်သည်။! တောင်ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ငါးဖမ်းခြင်း။
ဂေါက်သီးသည်ဟာသအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. အဘယ်ကြောင့်? အကြောင်းရင်းတစ်ခု, USGA မှဂေါက်သီးသမား ၈၅ ရာနှုန်းသည်စည်းမျဉ်းများအရမကစားကြပါ (အချို့သိလျက်, များစွာသောသတိမရှိ). နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဂေါက်သီးသည်ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသောကစားနည်းဖြစ်သည်; တစ်နေ့တွင်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဘောလုံးကိုအနိုင်ယူပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးအန္တရာယ်အားလုံးသို့ဆင်းသက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကစားသမားသည်မကောင်းမှုကိုကစားလိမ့်မည်. ဂေါက်သီးတူညီသောအသက်ရှူအတွက်ကျင်းပခြင်းနှင့်ကျိန်ခြင်းကိုခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ရယ်စရာအသုံးပြုခြင်း, သင့်ရဲ့သတင်းလွှာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအတွက်သင့်လျော်သောကာတွန်းကားကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ပါလိမ့်မည်သေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ကာတွန်းနှင့်ရယ်စရာကာတွန်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်စီးပွားရေးပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်လိမ္မာပါးနပ်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည်အတိုင်း, လူတွေဟာဟာသကိုနှစ်သက်ပြီးရယ်မောကြတယ်. ဒါဟာလိင်ရောင်းချကြောင်းသက်သေပြနေသည်, ကာတွန်းတွေ၊ ဟာသတွေလိုပဲသင့်ကိုဖောက်သည်တွေပိုပိုပြီးငွေရှာမယ်. ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ကာတွန်းသမားတွေရှိခြင်းဟာလိမ္မာပါးနပ်တဲ့အချက်ပဲ. ဟာသသည်သင်၏ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်’ အာရုံစူးစိုက်မှု. ကာတွန်းတစ်ခုကမင်းရဲ့သတင်းလွှာထဲမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်. ကာတွန်းရုပ်ပုံသည်သင်၏သတင်းလွှာနှင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်စဉ်သင်စာရင်းပေးသွင်းသူမြင်သောအရာဖြစ်သည်. သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်ရန်အတွက်မူရင်းသည်အဓိကဖြစ်သည်. ကာတွန်းများသည်သင်၏စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အဓိကမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်နိုင်သည်. သင်၏သတင်းလွှာရှိဂေါက်သီးရိုက်ကာတွန်းများသည်အသင်းဝင်များကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်
ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲ. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြည့်ရှုကြသည်မဟုတ်? အခုတော့ပညာပေးအစိတ်အပိုင်း. ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲမရနိုင်ပါ! ကြောင်းသင်၏အာရုံကိုရခဲ့တယျ? နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပါ ဦး. ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲမရနိုင်ပါ! ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောစွမ်းရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စွမ်းအားမြင့်မားသည်. ငါသည်သင်တို့ကိုဖြစ်ကောင်းဤမေးခွန်းကိုသငျသညျနှလုံးကယူ is'did ဒီ'သင် before ကြားကြားဖူးတယ်ငါသိ၏? သို့မဟုတ်သင်ရုံသင်၏ပခုံးပခုံးနှင့်သင်၏မျှော်လင့်ဂေါက်သီးတိုးတက်မှုဖို့တူညီတဲ့စိတ်ပျက်စရာလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်လက်ခဲ့တာလဲ? ကျနော်တို့ဂေါက်သီးလွှဲဖျက်သိမ်းသည့်အခါနည်းစနစ်များနှင့် Physically'it ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နီးကပ်ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်သွားသောအရာကိုကြည့်ဖို့. အဓိကအားသာချက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏရှိပါသည်. အထက်ကျောရိုးနှင့်အနိမ့်ကျောအစွမ်းသတ္တိ. ထိုအခါအစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတားအဆီး. လည်ပတ်ရှုထောင့်ကနေပခုံးတည်ငြိမ်မှု. ဒူးဆစ်အလုံအလောက်နှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းရန် Quad strength. ငါဆက်သွားနိုင်ဘူး. သင်ပုံလာပြီလား? အနီးကပ်ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲတစ်ခုရရှိရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်. သင်၏လက်ရှိအကန့်အသတ်များနှင့်သင်၏လွှဲပြောင်းမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုအာရုံစိုက်သောတစ်ခု. သင့်၏ swing အမှားများကမည်သည့်အကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည်ကိုသင်သဘောပေါက်ပြီးသည်နှင့်သင်သည်စုံလင်သောဂေါက်သီးလွှဲခြင်းသို့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်. ဟန်ချက်မပျက်ရန်နှင့်သင်၏ရိုက်ချက်ကိုဆိုးရွားစေရန်သာဂေါက်သီးလွှဲခြင်းတွင်သင်အကြိမ်မည်မျှကြိုးစားခဲ့သနည်း? ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ backswing? သင်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီလား 90 သင့်ရဲ့လိုလားသူကဆိုပါတယ်တူသောဒီဂရီပခုံးအလှည့်, ထိုကဲ့သို့သောတင်းမာနေပြီးခွန်အားမရှိသောအရာများကိုဖန်တီးရန်သာလျှင်သင်သည်ဂိမ်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်? သငျသညျစုံလင်သောဂေါက်သီးလွှဲအောင်မြင်ရန်လိုလျှင်သင်၏ချဉ်းကပ်မှုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရရှိပါသည် you' ပြောပြရန်ဤနေရာတွင်မိပါတယ်. သင်နှင့်စတင်ပါ! ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်ရိုက်လွှဲသည်အတွင်းပိုင်းတွင်ရှိသည်
Buyinganew kayak is just the beginning of your new adventures. But before you can hit the water, you will have to buy several other important pieces of kayak equipment. You will immediately discover when you buyakayak that the extra equipment required becomes quite important. Kayak paddle accessories are the top factor when starting your adventures. Paddles make the kayak move more smoothly. The kayak would lose its allure instantly without paddles! As you shop for paddle accessories, you will immediately see that these accessories arearequirement. Because the paddles are very important, you will want to buyapaddle bag to keep your paddles undamaged and in working condition. If there are cracks or single blemishes in one of the paddles, you will be aware of it immediately. The kayak will move less smoothly, and you will noticeachange in your paddling. Oar locks are another accessory for you to consider. This really depends on personal preference. Oar locks are molded to the side of your boat to help you paddle better and keep your oars locked in place. Oar locks don’t cost very much and are perfect for those who think they need them. These are notanecessity for everyone, but they areacommon choice. A paddle leash is important for when you fall out of the kayak or have an accident. The leash lets you grab the paddle when it is attached to the boat. The leash will increase your chance of surviving if you ever have such an accident. These accessories show you how much work goes into kayaking even before you get to the water. Kayaking requires planning and shopping before you can get your boat out for its very first run. သို့သော်, once you get all the components together it will greatly enhance your enjoyment of this fantastic sport. Important Accessories For Your New Kayak Paddles
ဂေါက်သီးရိုက်ချိန်သည်စနစ်တကျအသံမြည်သည့်အသံကိုပြန်လုပ်နိုင်သည့်အဓိကအချက်ဖြစ်သည် 18 တွင်း. အမှန်မှာမှန်ကန်သောအချိန်ကာလသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းသည်မှန်ကန်သည်. ဒါကရိုက်ကူးတဲ့အခါဂေါက်သီးသမားတွေအာရုံစိုက်ရမယ့်အဓိကအကြောင်းရင်းပဲ. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအချိန်သည်ဂေါက်သီးသမားကသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်အပြင်သူ၏ ဦး နှောက်မှအမိန့်များကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်သူ၏ကြွက်သားများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုလျင်မြန်စွာရရှိစေသည့်နည်းလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။. တကယ်တော့တူညီတဲ့အခြေအနေကဘယ်အားကစားသမားမဆိုဖျော်ဖြေသူပါ. စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာအားကစားသမားများနှင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများစွာတို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုသူတို့၏အစီအစဉ်တွင်လုပ်ဆောင်ကြပြီးသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ထားသည်. ဂေါက်သီးရိုက်ချိန်သည်ခက်ခဲပြီးအခြေအနေများစွာတွင် ပို၍ ခက်ခဲသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်, အများအပြားအားကစားသမားများအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အခြေအနေထက်. အပျော်တမ်းဂေါက်သီးသမားများစွာသည်ဂေါက်သီးရိုက်ချိန်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ကြွက်သားများမပါ ၀ င်ဘဲသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကြွက်သားများကိုတုံ့ပြန်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်. ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကမဖြစ်နိူင်ဘူး၊ ဒါကအပျော်တမ်းကစားသမားများစွာဟာသူတို့ရဲ့ဂေါက်သီးကစားနည်းကိုဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲ, ခဲနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်တိုးတက်အောင်. အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အချိန်များစွာယူပြီးဂေါက်သီးရိုက်အချိန်ကိုက်ခြင်းအတွက်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကြွက်သားများကိုအခြေအနေကောင်းရန်ဂရုစိုက်ပါ. ရလဒ်အမြဲပြသပါ. ဤအခြေအနေသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ရှိနေရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအစဉ်အလာအားဖြင့်ဂေါက်သီးအားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်သာ (သို့) လုံးဝမပါ ၀ င်သောအပန်းဖြေခြင်းကစားနည်းဟုရှုမြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤအမြင်ကဂေါက်သီးသမားများစွာအားသူတို့၏ဂေါက်သီးကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ဒဏ်ရာများရရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, သူတို့မဆိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဂေါက်သီးလွှဲအချိန်ကိုက်အောင်မြင်ရန်ပျက်ကွက်သော်လည်း. သို့သော်လည်းဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်မှုသည်လူအချို့ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသကဲ့သို့တင်းကျပ်။ တင်းကြပ်မှုမရှိပါ. လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုသင်၏အားလပ်ချိန်ခဏရသောအခါသင်၏ရုံး၌ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်. 15 သင်၏အလုပ်နေရာ၌တစ်စက္ကန့်လျှင်လုံလောက်သည်. ရှင်းလင်းသောအချက်မှာဂေါက်သီးသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်ဂေါက်သီးအားကစားကို ဦး စွာမမှီဘဲဂေါက်သီးရိုက်ချိန်ကိုအောင်မြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်. သင်၏ဂေါက်သီးရိုက်ချိန်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
Champ Bailey ကိုဇွန်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 22, 1978 Folkston ၌တည်၏, ဂျော်ဂျီယာ. လူအများစုက Champ ဟူသောအမည်ဖြင့်သူ့ကိုသိကြသော်လည်း’ သူ၏အစစ်အမှန်အမည်မှာအမှန်တကယ် Roland ဖြစ်သည်. သူ၏မိခင်ကအားကစားအောင်မြင်မှုများကြောင့်သူ့ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကနာမည်ပြောင်ပေးခဲ့သည်. ဘေလီသည်အားကစားတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်တစ်ခုတွင်အားကစားသမားကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားသောအခါသူမသေဆုံးပြီဟုပြောခြင်းသည်ဘေးကင်းနိုင်သည်. သူ၏အစောပိုင်းကစားကွင်းများကတည်းကသူသည်အမြဲတမ်းကွင်းလယ်တွင်အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်. အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးနောက် Bailey သည်ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်၌ဆက်လက်ကစားခဲ့သည်. ဂျော်ဂျီယာကိုကစားစဉ်သူသည်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ထိပ်တန်းကာကွယ်ရေးကစားသမားတစ် ဦး အဖြစ်လူသိများလာသည်. အတိုက်အခံအဖွဲ့များသည်ဘေလီအားဘောလုံးကိုပစ်ရန်ခဲယဉ်းသည်. ပြီးတော့သူတို့လုပ်ခဲ့ရင်များသောအားဖြင့်ကြားဖြတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်. ထဲမှာ 1999 NFL ဝါရှင်တန် Redskins မူကြမ်းပထမအကျော့အတွက်သတ္တမရွေးနှင့်အတူ Bailey ရွေးချယ်ထားကြသည်. လူအတော်များများကဒီဟာကမကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုပဲလို့ခံစားခဲ့ရပေမယ့်, Redskins တစ် ဦး ထူးချွန်ဖုံးထောင့်အများကြီးလိုအပ်နေခဲ့ကြသည်. မီ 2004 ရာသီဆဲတယ်, Bailey ကို Denver Broncos သို့ရောင်းဝယ်ခဲ့သည်. ဒီကုန်သွယ်ရေးအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ခဲ့သည်, နှစ်ဖက်စလုံးကကုန်သွယ်ရေးအမှန်တကယ်မဖြစ်မီကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်. ကုန်သွယ်မှုအပြီးတွင်ဘေလီသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇ နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် $63 သန်း. Bailey အား All Pro Team တွင်သုံးကြိမ်တိုင်အမည်ပေးခဲ့သည်, ထို့အပြင် Pro Bowl အသင်းကိုပြီးခဲ့သည့်ရာသီခုနစ်ရာသီအတွက်လည်းဖန်တီးပေးခဲ့သည်. ၎င်းသည်ပရီးမီးယားလိဂ်၏အကောင်းဆုံးထောင့်ကန်ဘောအဖြစ်သူ့ကိုပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်. အားကစားဝါဒမြင့်မားခြင်းနှင့်ဂိမ်းအတွက်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုတို့ဖြင့်ဖြစ်သည်, Champ Bailey ဟာအမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ. သူသည်တင့်ကားထဲတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောရာသီဥတုများစွာကျန်သေးသည်ဟုပြောရန်စိတ်ချရသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံး Broncos သူ့ကိုဘောလုံး၏ခုခံကာကွယ်ဘက်မှာကစားရှိသည်အဖြစ်သူတို့အနိုင်ရကောင်းတစ် ဦး အခွင့်အလမ်းရှိသည်! Champ Bailey 1999 မူကြမ်းနေ့ရွေး
မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုနားလည်လေ, ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကဖြစ်လာသည်. ဤဆောင်းပါးကိုသင်ဖတ်ရှုသောအခါငါးဖမ်းခြင်းအတွက်ရေဖတ်သည့်အကြောင်းအရာသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်. ငါးသည်ရာသီအလိုက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသောအချို့အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်. ဤသည်ရေအပူချိန်ပါဝင်သည်, ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ, နှင့်ရေပမာဏ. အောင်မြင်သောယင်ကောင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဖြစ်လိုပါကသင်ငါးဖမ်းနေသည့်ရေကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုလေ့လာရမည်. သင်ရေဖတ်တတ်လာသည်နှင့်အမျှသင်တွေ့ရှိရမည့်အရာအချို့မှာ (1) Non- နို့တိုက်ကျွေးရေးကာလအတွင်း, ရေနက်ရှိုင်းသောအိတ်ထဲရှိလျှင်ငါးများကိုရိုက်ရန်တိုက်တွန်းနိုင်သည်, နှင့် (2) ငါးအစာစားသောအခါရေကန်များနှင့်အသင့်အတင့်ရေအိတ်ထဲရှိကမ်းရိုးတန်းမျဉ်းများတွင်တွေ့ရသည်. ရေအကြောင်းလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်သင်မရေမရာဖြစ်နေသည်. ပညာရှိစာဖတ်သူများသည်အဖိုးတန်ရေရရှိရန်အတွက်၎င်းကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားမည်ဖြစ်သည်. ရေဓာတုဗေဒသည်ငါး၏ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကကျသည်, သူတို့တွေ့ရှိရာတည်နေရာ, ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့တစ်ခုကိုဖမ်းနိုင်ဖို့သင်ဘယ်လောက်အထိအောင်မြင်ခဲ့လဲ. ရေဓာတုဗေဒ၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုမှာ pH ဖြစ်သည်. သိပ္ပံနည်းကျအသုံးအနှုန်းများအတွက် pH အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်: ရေထဲမှာဟိုက်ဒရိုနီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏အနှုတ် log molar အာရုံစူးစိုက်မှု. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် pH ဆိုတာဟာရေထဲမှာအချဉ်ဓာတ် (သို့) အခြေခံဖြစ်မှုကိုတိုင်းတာသည်. pH ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်စကေးအပေါ်တိုင်းတာသည် 1 ရန် 14. ၏ pH ကို7ကြားနေဖြစ်စဉ်းစားသည်. ထက်နည်း၏ pH စုစုပေါင်း7ကျော်တစ်အတိုင်းအတာနေစဉ်အက်ဆစ်ဖြစ်ကြသည်7အခြေခံစဉ်းစားသည်. ငါးအများစုသည်၎င်းတို့နေထိုင်သောရေတွင် pH အမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ကြသည်. အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည် pH အတွင်းပိုင်းအဆင့်များကိုထိန်းညှိနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ၄ င်းအားငါးများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏စနစ်အတွင်းရှိအခြေစိုက်စခန်းများနှင့်အက်စစ်များ၏အချိုးအစားကိုအဆက်မပြတ်ညှိပေးသည်. သူတို့ဟာဆီးထဲမှာအက်ဆစ်တွေပိုထုတ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ရှူတာကိုထိန်းချုပ်တာတွေလုပ်တယ်. ငါးတစ်ကောင်အသက်ရှူလေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်များသည်သွေးမှထွက်လာသည်, ထို့ကြောင့်သွေးထဲတွင် pH အဆင့်ကိုမြှင့်တင်. သို့သော်, ငါးအများစုသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏စနစ်ကိုပုံမှန်ထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြသည်. ငါးသည်အက်ဆစ်သိပ်မများလွန်းသောသို့မဟုတ်အခြေခံလွန်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ပါက၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတုဗေဒကိုမစီမံနိုင်တော့ပါ. ဒီလိုဖြစ်လာရင်ငါးဟာအစာမစားနိုင်တော့ဘဲနောက်ဆုံးမှာသေဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်. တခါတရံတွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲသည်, သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုအထက်တင်ပြသတင်းအချက်အလက်၏အဓိပ္ပာယ်အောင်အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်အပြုသဘောပါပဲ. ငါးဖမ်းခြင်းကျွမ်းကျင်သူများကိုမည်သို့ပျံသန်းရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ရေကိုဖတ်ပါ
လောင်းကစားခြင်းသည်လူတိုင်းကိုသင်ငွေပေးရန်ကြိုးစားနေပုံရသည်ဟုထင်ရသည့်ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်သည်. သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာလောင်းကစားရုံနှင့်လောင်းကစားရုံများသည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်အရွယ်အစားကျုံ့သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားဆွဲဆောင်သည်. လောင်းကစားသမားတိုင်းသည်ထိုကြီးမားသောအနိုင်ရမှုကိုမျှော်လင့်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးများအတွက်အိပ်မက်နေဆဲဖြစ်သည်. slot machine များသည်သင်မည်မျှချောင် ချ၍ အနိုင်ရသည်ကိုခန့်မှန်းရန်အန္တရာယ်နည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဒါဟာသင်တစ် ဦး စိတ်အေးလက်အေးစိတ်နှင့်ကစားနိုင်ပြီးကြံစည်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, အစီအစဉ်, ဒါမှမဟုတ်ခန့်မှန်း. ဤတွင်ကံတာဝန်ခံကြာပါသည်. ကောင်းပြီ, နီးပါး! slot machines ပေါ်တွင်လောင်းကစားသည့်အခါအနိုင်ရသူကိုကူညီရန်အကြံပေးချက်များကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်: ‘ ချေးငွေကိုမကစားပါနဲ့. ဤအရာသည်သင့်အားတင်းမာစေပြီးသင်၏အကွာအဝေးမိုင်အကွာအဝေးကိုသာစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်. သငျသညျအနိုင်ရဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်သဲလွန်စများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုရန်လျော့နည်းကျရောက်လွယ်သောကြောင့်အပြုသဘောသက်သောင့်သက်သာရှိသောစိတ်သည်ဘဏ္treာများကိုဆွဲဆောင်သည်. ‘ သင်က slot machine အနီးတွင်အဘယ်ကြောင့်ရှိနေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားပါ. 'ဒါပဲ' လုပ်နေတာသင်ပိုက်ဆံနည်းနည်းလောက်ရရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျော်ဖို့ကောင်းလား, သို့မဟုတ်သင် 'ကြီးမားသောအနိုင်ရ' ပြီးနောက်ဖြစ်ကြသည်. ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်မည့် slot machine အမျိုးအစားကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သေးငယ်သည့်လခနည်းသောငွေပေးချေမှုများနှင့်မကြာခဏနည်းသောကြီးမားသော jackpot တို့၏စက်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ‘ သင်၏ကံကြမ္မာကို slot machine ပေါ်ရှိသင်္ကေတများ၌ဖတ်ပါ. သင်က slot ကစက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ, သူကဘယ်လောက်သင်္ကေတများစစ်ဆေးပါ. သင်္ကေတအရေအတွက်သည်ပြုလုပ်နိုင်သောပေါင်းစပ်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးအစားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်နိုင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ရှိသည်. သတိရပါ ‘ ပိုပြီးအနိုင်ရရှိဆိုလိုတာကလျော့နည်းအနိုင်ရငွေပမာဏ. ‘ ကြောင်း Biggie အဘို့အသွားရတဲ့အခါ? သေးငယ်တဲ့အနိုင်ရလဒ်တွေကမင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေမှာမဟုတ်ဘူး. သင်၏လက်ဖဝါးများသည်တိုးတက်သောကြီးမားသောထီပေါက်ရန်အတွက်ကစားရန်အလွန်အမင်းလိုလိမ့်မည်. တိုးတက်သော jackpot သည်အလွန်ကြီးမားသည်အထိဤဆန္ဒကိုမလျှော့ချပါနှင့်. တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေသောထီပေါက်သည့်အဆောက်အအုံသည်တကယ့်ကိုကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှသမိုင်းကပြောခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ကွဲရန်အလွန်ဖွယ်ရှိသည်. ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းကိုစောင့်ပါ. ‘ အပိုဆုပေးသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလောင်းကစားရုံများတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုကိုကစားနိုင်သည်. ၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်မှုသာမကသင်ကစားရန်ရက်ရောသောဆုကြေးများကိုပါပေးလိမ့်မည်. ‘ ရပ်တန့်ရန်သတိရပါ. ကစားသမားအတော်များများသည်ဤရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းကိုမေ့သွားပြီး slot များကစားခြင်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေအားလုံးနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပို၍ များပြားသည်. သင်ပိုက်ဆံထဲသို့ဝင်လာသည်ကိုမြင်သောအခါသိမ်းသွားရန်လွယ်ကူသည်. စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်သူတွေကသူတို့ဟာ“ မြင့်” နေတုန်းမှာထွက်သွားကြ.6အသုံးဝင်သောအွန်လိုင်း slot အချက်အလက်များ
Wimbledon ရှိ Quarterfinals ကိုအမေရိကန်များမရောက်ခဲ့ပါ
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အမေရိကန်များသည်လေးပုံတစ်ပုံသို့ရောက်ခြင်းမရှိသည့် All England Club တွင်ဖြစ်သည် 1911, အဘယ်သူမျှမ U.S. ပြိုင်ပွဲတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားသုံး ဦး သာပါဝင်သည်. နောက်ဆုံးရှစ်ယောက်ဝင်အမေရိကန်များမ ၀ င်သောနောက်ဆုံး Grand Slam ဖြစ်ရပ်သည် 1976 Australian Open. ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ဒါဟာသမိုင်းကသူ့ဟာသူထပ်ခါတလဲလဲကတည်းကရာစုနှစ်နီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်, Wimbledon quarterfinals တွင်မည်သည့်အမေရိကန်မျှကစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် Wimbledon ၏တစ် ဦး တည်းသောဘွဲ့များအနေဖြင့်အခြားမည်သည့်နိုင်ငံထက်မဆိုပိုမိုအနိုင်ရကြောင်းသင်သတိပေးသည့်အခါ ပို၍ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်လာသည်။, သူတို့နိုင်ခဲ့ပြီ 83. ဒီနှစ်ဒီနှစ်သရေကျခဲ့သည့်အမေရိကန်အမျိုးသားကိုး ဦး အနက်မှမည်သူမျှစတုတ္ထပတ်သို့မရောက်နိုင်သေးပါ, Andre Agassi နှင့် Andy Roddick တို့သည် Rafael Nadal နှင့် Andy Murray တို့အားရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်, အသီးသီး. တဆယ်လေး U.S. အမျိုးသမီးများဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်, ကာကွယ်ရေးချန်ပီယံနှင့်သုံးကြိမ်အနိုင်ရဆားဗီးမှ Jelena Jankovic အားဖြင့်စနေနေ့စိတ်ဆိုး. Andre Agassi ကဒီတုတ်ကောက်ကို Wimbledon မှာစနေနေ့က Andy Roddick ဆီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့် Roddick ကကျဆင်းသွားသည်, နောက်ဆုံးအမေရိကန်အမျိုးသားများသည်တတိယအကြိမ်ကစားပွဲ၌ All England Club မှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်. Agassi သည်သူ၏နောက်ဆုံး Wimbledon တွင်ယှဉ်ပြိုင်နေသော်လည်း, သူကတစ် ဦး ၏အများဆုံးလုပ်ဖို့ပျက်ကွက် 5-3 ကမ္ဘာ့နံပါတ်များကိုဆန့်ကျင်။ ပထမ ဦး ဆုံးချိတ်ဆက်ခြင်း.2ရာဖေးလ်နာဒယ်,4သူ၏နောက်ဆုံး Wimbledon အသွင်အပြင်အတွက်ဆုံးရှုံးမှု. မည်သူမဆိုရလဒ်များကိုအားဖြင့်အံ့အားသင့်သည်လိုမဟုတ်ပါဘူး. နောက်ဆုံးတော့, 36 နှစ်အရွယ် Agassi, သူပွဲစဉ်အပြီးလူအစုအဝေးမိန့်တော်မူသောအခါသူ၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိခဲ့ပါတယ်, သူကနောက်ကျောကမကောင်းတဲ့သူနှင့်သူရင်ဆိုင်ရခဲ့သမျှကထိပ်တန်းရန် 16 နှစ်ငယ် Nadal, အလွန်ကြီးစွာသောတင်းနစ်ကစားသမား 2nd; Williams ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီနှစ်အများကြီးကစားမထားပါဘူး; နှင့် Roddick အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာသည်သူ၏အဆိုးဆုံးရာသီဖြတ်သန်းသွားသည်, တစ်ခုတည်းဗိုလ်လုပွဲရောက်ရှိရန်ပျက်ကွက်. Wimbledon ရှိ Quarterfinals ကိုအမေရိကန်များမရောက်ခဲ့ပါ
ကျောက်တောင်တက်ခြင်း: Local ကိုစတင်ပါနှင့် Global သွားပါ
လူများစွာသည်ကျောက်ဆောင်တောင်တက်ခြင်းအားဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုကမ္ဘာကြီးကိုထူးခြားသောနေရာမှကြည့်ရှုခွင့်ပေးသောကြောင့်ဆွဲဆောင်သည်. သငျသညျခရီးသွားလာကိုနှစ်သက်သောသူတစ် ဦး ကြံ့ခိုင်ရေးရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါ, ကျောက်တောင်တက်ခြင်းသည်သင်၏အားကစားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးစဉ်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်. ဤထူးခြားသောအားကစားကိုနှစ်သက်သောသူများသည်ထင်ရှားသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းတွင်သူတို့၏အားလပ်ရက်များကိုတည်ဆောက်လေ့ရှိသည်, တောင်တက်သမားတစ်ဦးထက်ပို၍ အမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်များသို့ရောက်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြင်ကွင်းများကို ခံစားရင်း ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ကမ္ဘာကို ခရီးထွက်ခဲ့သည်။. ကျောက်တောင်တက်တဲ့အခါ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအနေနဲ့ လုပ်ပါ။, သင်သည် ရှုခင်းများဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုလုံးကို ဖွင့်လှစ်ပေးနေသည်။. သင်ဟာ ကျောက်တောင်တက်လောကကို အသစ်အဆန်းလုပ်ပါ။, သင်လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးက ပိုထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ဒေသတွေဆီ မထွက်ခင် သင့်ဒေသမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရယူပါ။. အကယ်၍ သင်သည် သင်၏နည်းပညာကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် သင်လမ်းပေါ်မတက်မီ ကုန်သွယ်မှုကိရိယာများနှင့် ရင်းနှီးစေရန်အတွက် အချိန်အနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက, မရင်းနှီးသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်မှပေးဆောင်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တောင်တန်းတွေကြားထဲမှာ သင်မနေနိုင်ရင်တောင်, သုတေသနအနည်းငယ်ဖြင့် တစ်နေ့တာခရီးအတွင်း စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာ တောင်တက်လမ်းကြောင်းများစွာကို သင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်, သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး အားလပ်ရက် ပိတ်ရက်ရှည်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဦးတည်ရာတစ်ခုဖြစ်ရန် လုံလောက်စွာ နီးစပ်ပါသည်။. အကယ်၍ သင်သည် သင့်ဒေသရှိ လမ်းကြောင်းကောင်းများနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော တောင်တက်သမားများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သင့်ကျောက်တောင်တက်ခရီးကို စတင်ပါက, နောက်ဆုံးတွင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နိုင်ငံရပ်ခြားနေရာများသို့ ခရီးထွက်သည့်အခါ သင့်တွင်လာမည့် အခွင့်အလမ်းများကို အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် အဆင်သင့်ဖြစ်မည်ကို သင်သေချာနိုင်သည် ။. 'အားကစားကို စိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝါရင့်တောင်တက်သမားအများစုက သဘောတူတယ်။’ တက်ခြင်း။, များသောအားဖြင့် အချိန်တိုတိုနှင့် ပြီးမြောက်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။, သို့မဟုတ် 'ကုန်သွယ်မှု’ တက်ခြင်း။, အခက်အခဲနှင့် ခံနိုင်ရည် နှစ်မျိုးစလုံးတွင် ပို၍ စိန်ခေါ်မှု များသည်။, ကျောက်ဆောင်များပတ်ပတ်လည်ကို လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ တောင်တက်ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာများဖြင့် အရည်အချင်းရှိပြီး ယုံကြည်မှုရှိသော ခေါင်းဆောင်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်၊. တချို့တောင်တက်သမားတွေက ကိုယ်တိုင် သင်ပေးတယ်။, ဒါပေမယ့် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ လမ်းပြမပါဘဲ တောင်တက်ဖို့ ကြိုးစားတာက ဆရာတစ်ယောက်ရှိနေရင် အလွယ်တကူ ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အမှားတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။. ကျွမ်းကျင်တောင်တက်သမားသည် ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် လိုအပ်သောဘေးကင်းရေးသတိထားချက်များကို သေချာလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် သင့်ပန်းတိုင်များကို အောင်မြင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။. အင်တာနက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။, အဆင်သင့်ရှိပြီး ဆန္ဒရှိသော တောင်တက်ခေါင်းဆောင်ကို ရှာဖွေခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။. ကျောက်တောင်တက်ခြင်း မက်ဆေ့ချ်ဘုတ်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ပေါ်လာသည်။, နှင့် ဤဘုတ်များပေါ်ရှိ အချက်အလက်များကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး ဖတ်ခြင်းသည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော တောင်တက်သမားများအတွက် အလွန်အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။. နာမည်ကြီး တောင်တက်ဆိုဒ်တစ်ခုတွင် ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းနီးပါးတွင် ခေါင်းဆောင်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။, သင်အပါအဝင်. ထို့အပြင် သင့်ဒေသရှိ အခြားတောင်တက်သမားများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးကို ပေးဆောင်ပါ။, ဤဝဘ်ဆိုဒ်များကို မကြာခဏလာလေ့ရှိသော အားကစားသမားများနှင့် ဝါသနာရှင်များသည် သင့်အား အကောင်းဆုံးစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကို ပေးနိုင်ပါသည်။, နှင့် သင့်ဒေသရှိ မတူညီသောလမ်းကြောင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းများ. ကျောက်တောင်တက်ခြင်း: Local ကိုစတင်ပါနှင့် Global သွားပါ
A hole-in-one is one of the rare achievements that professional golfers always long for. Whenagolfer holes out the ball from the teeing ground with one stroke, he or she earns kudos for having madeahole-in-one. As it’saonce-in-a-lifetime achievement, every golfer remembers when he or she achieved the feat. They also remember if their friends have made it. Golfers are crazy about Holes-in-One. Making the shot is the ultimate trial of their skill and proficiency. Those who achieve the feat become so elated that they throwaparty at the clubhouse. It’s the memorable moment of anybody’s golfing career. Although the fellow golfers join the party and celebrate the occasion, they definitely feel jealous about the achievement. It’sadream for every professional golfer to makeahole-in-one at least once in his or her career. But makingahole-in-one doesn’t take too much time. Golfers just need six seconds to makeahole-in-one. Some golfers come extremely close to hitting the target, but the honor remains illusive for them. The closer they come to hitting the target, the more they become hopeful of their chances. But the magical swing that eventually makesahole-in-one possible is extremely hard to come by. Even for the most prolific player in the golf circuit, makingahole-in-one isadifficult job. A hole-in-one isa150-yard shot. Golfers start practicing the shot well before the tournament. သို့သော်, the standards for grantingahole-in-one are still very unclear. If you want your hole-in-one achievement to be recognized officially, you will have to produceawitness in support of your claim. When big prize money is involved, the authorities will ask for authentic proof substantiating your claim. Hole In One
FBI အဆိုအရ, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး ၄ ယောက်သည်နေ့စဉ်သေဆုံးကြသည် 130,000 အမျိုးသမီးများကသူတို့သည်နှစ်စဉ်မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်မုဒိမ်းကျင့်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းများခံခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြကြသည်. ဤကဲ့သို့သောစာရင်းဇယားများ၏, အမျိုးသမီးများစွာသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလေ့လာရန်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်သည့်သင်တန်းများတွင်တက်ရောက်ကြသည်. အရာဖြစ်ပါသည်, ကာလတိုကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရေးလူတန်းစားသည်သင်ကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်နယ်ပယ်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ကိုယ်ခံပညာသင်တန်းများသည်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက်သင့်ကိုအထူးလေ့ကျင့်ပေးမည်မဟုတ်ပါ, အကယ်၍ သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြုံခဲ့ရရင်သူတို့ကသင့်ကိုကာကွယ်ဖို့စွမ်းရည်ပေးလိမ့်မယ်. အကောင်းဆုံးအပိုင်းကဒီ Self- ကာကွယ်ရေးအမြဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး. လူအများစုမသိသောအရာမှာကိုယ်ခံပညာဆိုင်ရာစာသင်ခန်းကောင်းတစ်ခုတွင်သင်သည်အသိပညာကိုရရှိရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်များကိုလေ့လာလိမ့်မည်, သင်ပိုမိုအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာကငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှု, သင်၏ဘဝ၌ရှိသမျှသောရှုထောင့်၌တည်၏. ယုံကြည်မှု. သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်ယုံကြည်မှုမရှိပါကကမ္ဘာပေါ်ရှိကိုယ်ထိလက်ရောက်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်အားလုံးကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ဒါကကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ရေး၏ဂုဏ်အသရေပါပဲ. ကိုယ်ခံပညာကိုအောင်မြင်စွာလေ့ကျင့်ရန်, သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုညှိရန်လိုအပ်သည်. ဤသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိခြင်းကသင့်အားလိုအပ်လျှင်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ခုခံကာကွယ်ရန်သင်၏လိုအပ်မှုကိုယုံကြည်စိတ်ချစေသည်. သင်၏ဒေါသမပျောက်ဘဲနေ့စဉ်နှင့်ထူးခြားသောအခြေအနေများကိုသင်ကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏ရပ်တည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်. သင်ဖြစ်လိမ့်မယ် (နှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်) ပိုပြီးယုံကြည်မှု ‘ ယုံကြည်မှုရှိပုံရသောလူများသည် 'လွယ်ကူသောပစ်မှတ်' များနှင့်မတူသောကြောင့်အကြမ်းဖက်ခံရသူများနည်းပါးသည်. အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အသိအမြင်. ကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်နေစဉ်, သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်. ဤအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်သင်၏ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များသို့လည်းသယ်ဆောင်သွားသည်. မကြာခင်မှာပဲ, သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ကျောင်းနှင့်အိမ်. အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်သည့်အခြေအနေများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင်ပိုမိုသတိထားမိကြောင်းသင်ပင်တွေ့လိမ့်မည်. ငြိမ်းချမ်းရေး. ကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ခြင်းကသင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အတွင်းငြိမ်သက်မှုကိုပေးလိမ့်မည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ထိထိရောက်ရောက်ကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်ရန်, သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအမြဲပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်. သင်၏အရည်အချင်းများကိုအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်နေသောကြောင့်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ငြီးငွေ့မည်မဟုတ်ပါ (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုလုံး). ကြောင်းအပြင်, ကိုယ်ခံပညာကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်. ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်, သို့သော်အဘယ်သို့သင်မသိသောကိုယ်ခံပညာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်တစ် ဦး ခြေလှမ်းနောက်ထပ်သွားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သောကိုယ်ခံပညာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများသည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်သင့်အားစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေနိုင်သည်. အစွမ်းသတ္တိနှင့်အခွအေနေ. သငျသညျကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့်တဲ့အခါ, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသင်အသုံးပြုသည်. သင်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကြွက်သားတစ်ခုတည်းကိုသာ သုံး၍ မရပါ. လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီတိုင်းမှအမြင့်ဆုံးရရှိရန်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည်. ကိုယ်ခံပညာသည်သင်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုတိုးစေသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောလူများမှာဒဏ်ရာနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားရှိခြင်းနှင့်သူတို့၏ကြွက်သားများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်. သငျသညျကိုယ်ခံပညာသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဘယ်လိုကူညီနိုင်ပုံကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်တည်နေရာသုံးခုထဲကတစ်ခုကို Bellevue မှာဆက်သွယ်ပါ, Lynnwood သို့မဟုတ် Kent, အခမဲ့ထူထောင်ရန် martialadvice@hotmail.com တွင်ဝါရှင်တန်2ရက်သတ္တပတ်လမ်းကြောင်းတိမ်းညွတ်. ဒါ့အပြင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကို www.kungfutemple.com နှင့် www.martialarts-instruction.com တွင်ကြည့်ပါ, ရောဘတ်ဂျုံးစ်မာစတာနည်းပြ 6th Degree Black Belt ပိုင်ရှင်, Kempo သိုင်းပညာကိုယ်ခံပညာသင်တန်းကျောင်း: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေးထက်ပို
အဆိုပါဂေါက်သီးပညာရှင်များသူတို့သဘောတူတစ်ခုခုရှိသည်. လွှဲချိန်တစ်ခုလုံးတွင်သင်၏ငွေလက်ကျန်ကိုမသိမ်းဆည်းပါက, ကောင်းတဲ့လေဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး. သင်၏ဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်မှာလွယ်ကူသည်, မထားဘူး? ကံမကောင်းစွာပဲ, သငျသညျ ‘အဖြူ knuck နေကြသည်ဒါကြောင့်တင်းမာနေအခါကောင်းသောချိန်ခွင်ရှိသည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး’ ကလပ်, တကိုယ်လုံးသည်တောင့်တင်း၏, သင်ဘောလုံးကိုအရမ်းကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေသည်. သင်ရုံဂေါက်သီးကစားရန်စတင်သောအခါ, သငျသညျမကြာခဏလွန်းဘောလုံးကိုမထိဖို့သတိပေးနေကြသည်. အာရုံစိုက်သောစွမ်းအင်သည်ဘောလုံးကိုကလပ်၏အလယ်ဗဟိုရှိဘောလုံးနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်နိုင်သည့်ခဲယဉ်းသောသွားခြင်းထက်များစွာဝေးစေသည်. သငျသညျကောင်းစွာမျှမျှတတအခါ, သငျသညျမှန်ကန်စွာဘောလုံးကို hit ဖို့ပိုအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်. မင်းခေါင်းကိုဆက်ထားပါ, သင်၏မျက်စိနှင့်ဘောလုံးကိုအာရုံစိုက်အတူ. သင့်ရဲ့ ဦး ခေါင်းကပိုနေတုန်းပဲ, ပိုကောင်းလေသင်ဘောလုံးကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်. သင်၏ဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်တီးရန်၎င်းသည်ကူညီသည်. သင်၏ချိန်ခွင်လျှာကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသောမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အာရုံကိုမဆိုဘောလုံးကိုအာရုံစိုက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ. သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုအပြည့်အဝငြိမ်ဝပ်စွာနေစေပြီးသင့်လက်မောင်းနေစဉ်အတွင်း၎င်းကိုမရွေ့ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. မင်းရဲ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းထားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကြွက်သားများအနားယူရန်လိုအပ်သည်. သင်အပန်းဖြေမထားဘူးဆိုရင်, ပြီးတော့မင်းခေါင်းကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏မှန်ရှေ့တွင်မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ရှုမည်ဆိုလျှင်, သင်လှည့်နေစဉ်အတွင်းသင့်ခေါင်းကိုငြိမ်နေစေရန်သင်၏ကြွက်သားများကိုအနားယူရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာမီသင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်. အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုဂေါက်သီးအတူတူတည်ဆောက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်အရာတစ်ခုခုကိုတွက်ထုတ်ရလိမ့်မယ်. သင်၏အစမှအဆုံးအထိသင်၏ ဦး ခေါင်းကိုတူညီသောအနေအထားတွင်ထားခြင်းဖြင့်စတင်ရန်လိုအပ်သည်. မင်းရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုဆက်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်, သင်ဘောလုံးကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်, သင်သည်လက်ျာအချိန်၌လက်ကိုဆန့်လိမ့်မည်. သင်၏ခေါင်းကိုလုံးလုံးလျားလျားထိန်းထားခြင်းဖြင့်သင်၏ပြproblemsနာများစွာကိုကုသနိုင်သည်. သင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲသင်၏ကလပ်မှားယွင်းစွာဆုပ်ကိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျမှန်ကန်စွာမှတဆင့်လိုက်နာကြဘူးလျှင်, မင်းရဲ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. သင်သည်သင်၏ဟန်ချက်ကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုစောင့်ရှောက်လျှင်, ထို့နောက်သင်သည်အလွန်ခက်ခဲစွာလွှဲသို့မဟုတ်သင့်ကလပ်ကိုဆွဲထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. သင့်ရဲ့လွှဲသို့ခွန်အားများများထည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ. သငျသညျအပန်းဖြေလိမ့်မည်ချောမွေ့စွာလွှဲနှင့်အောင်မြင်သော finish ကိုရပါလိမ့်မယ်. ဂေါက်သီးကစားနည်းကိုနှစ်သက်ရန်အတွက်သင်၏ဟန်ချက်ကိုထိန်းထားရန်လိုအပ်သည်. သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်အချိန်ယူပါလိမ့်မည်, သည်းခံကြလော့. သင်၏လက်ကျန်ငွေနှင့်သင်၏ ဦး ခေါင်းကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ထားရှိရန်အာရုံစိုက်ပါ။ အချိန်တန်လျှင်သင်၏သူငယ်ချင်းများကမနာလိုလိမ့်မည်ဖြစ်သောအလွန်ကောင်းသောဂေါက်သီးကစားခြင်းကိုနှစ်သက်မည်! ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်း၏သော့ချက်များ
Humminbird 937 – အဆိုပါအဆင့်မြင့်တံငါသည်ဒါမှမဟုတ် The Beginner သည်
ဘာလုပ်လဲ 937 မင်းကိုပေးရမယ်? သင်ဟာအဆင့်မြင့်တံငါသည်လား၊; ဒီကြီးမားတဲ့ဖမ်းယူနိုင်မှုကိုအခြားမည်သည့်ကိရိယာမှမပေးသင့်ပါ. အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုကြည့်ပြီးသင့်အားသူတို့ကမ်းလှမ်းရန်အဘယ်အရာကိုသာကြည့်ကြပါစို့, နေပါစေမင်းဘယ်သူလဲ. The 937 ခုနစ်လက်မအရောင် display ကိုပေးထားပါတယ်. ဒီပြသမှုဟာအတောက်ပဆုံးအလင်းရောင်မှာတောင်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. အခြားမော်ဒယ်များကသင့်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိအရာများကိုကြည့်ရှုရန်တွန့်ဆုတ်နေနိုင်သည်, သင်ဤမော်ဒယ်နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံရပါလိမ့်မယ်. မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးမြင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုအကျိုးပြုသည်, သင့်ပုံကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးပါစေနှင့်. ၏နောက်ထပ်ရှုထောင့် 937 ဒါက 12 ချန်နယ် WAAS GFP လက်ခံ. GPS သည်သင်၏တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင်ဘယ်မှာရောက်နေသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့် ဦး တည်ချက်ကို ဦး တည်သင့်သည်ကိုသိရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်. ငါတို့ထဲကဘယ်နှစ်ယောက်နည်းနည်းပျောက်အဲဒီမှာဆည်းပူးကြပါပြီ? ဒီအင်္ဂါရပ်ကသင်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပိုတိကျအောင်ထောက်ပြပေးလိမ့်မယ်. ၎င်းနှင့်အတူ UniMap တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် US သည်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကုန်းတွင်းရေကန်များနှင့်မြစ်များကိုပြသထားပါသည်. ဒါကဘယ်လိုစီမံရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးထားပါတယ်, ဘယ်နေရာကိုသင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုသည်, ဘယ်မှာလဲ. မည်သည့် fishfinder ၏ ပို၍ ပင်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်သည်သင့်အားမျက်နှာပြင်အောက်ရှိသင့်အားပြောပြနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်. သင်နှင့်အတူအကြီးအအသေးစိတ်အတွက်ရ 937. အဆိုပါ sonar အလွန်ကောင်းလှ၏, အဲဒါကသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်အောက်မှာဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာပဲ, ကြီးစွာသောအသေးစိတ်နှင့်အတူအောက်ဆုံးရန်. ၎င်းသည်သင့်ကိုအကျိုးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားအောက်ဘက်အောက်ရှိငါးများရှာဖွေခြင်း၏အားသာချက်ကိုပေးသည်. သင့်ကိုစောင့်နေတဲ့ကျောင်းတစ်ခုလုံးကပေအနည်းငယ်ကျော်သွားရင်ငါးမရှိတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်အချိန်ဖြုန်းနေတာလဲ? သငျသညျထို့နောက် Humminbird 937c fishfinder နှင့်အတူပိုပြီးဖမ်းလိမ့်မယ်. The 937 အလွန်ကြီးစွာသောနည်းနည်း gadget ကဖြစ်ပါတယ်. သင်ရှာဖွေနေသည့်ငါးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စွမ်းအားမြင့်မားသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင့်လက်ထဲထည့်ပေးသည်. မျက်နှာပြင်အောက်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့သင့်ကိုဓာတ်ပုံတွေပေးခြင်းဖြင့်, သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာရဲ့အဘယ်သို့သောအရာကိုသင်ရနိုင်ကိုသိလိမ့်မယ်. Humminbird 937 – အဆိုပါအဆင့်မြင့်တံငါသည်ဒါမှမဟုတ် The Beginner သည်
The house of the opening match for the 2006 ကမ္ဘာ့ဖလား, the Allianz Arena Stadium
The responsibles for the construction of the stadium that will host the opening match between Costa Rica and Germany are the architects Herzog and DeMeuron; they opted forasimilar construction as the old Munich Olympic stadium which was categorized as one of the most spectacular pieces of post-war architecture in Germany. Its particular cover is made of acrylic tiles held by high steel masts. The circumference is 800 meters and it hasacapacity of 66.000 seats. The new stadium will look like an enormous Zeppelin withalength of 259 မီတာ, 227 meters width and 50 meters height. The structure is covered byaskin of more than 2784 pillows all puffed up with air and stuffed with up to eight light bulbs. The special skin floats above the7floors that compose the monumental stadium. The skin is made ofaspecial material which will withstand heavy weather, ဆီးနှင်း, rain and also fireproof. Those pillows can be illuminated of different colors and all the seats are sheltered from the rain. With the largest parking area in Europe which hasacapacity of 11.000 ကားများ, the visitors will be guided by the colors of their teams. Its name came up because of the Allianz insurance company which donated 110 hundred million Euros in order to have their logo and name associated with the considered the most attractive soccer stadium in the world for many people. The total cost for this amazing soccer arena was 340 million Euros with another 300 million invested on the preparation for the World Cup inauguration of the first match of the tournament. The house of the opening match for the 2006 ကမ္ဘာ့ဖလား, the Allianz Arena Stadium
5 သင်၏ ဦး ခေါင်းမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Poker Play ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်းများ
သငျသညျနောက်ဆုံးတော့လုပ်ပြီးပြီ! သငျသညျနာရီနှင့်နာရီအဘို့အတက္ကဆက် Hold'em ကစားပါတယ်, အချို့သောကြောက်စရာအားလုံး ins dodged, အားလပ်ချိန်နှစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်၊ အခုသင်ဟာနောက်ဆုံးစားပွဲမှာထိုင်ပြီးခေါင်းစီးကာနဲ့ကစားနေတယ်. နောက်ဆုံးစားပွဲအောင်ခြင်း၏ဝမ်းမြောက်မှုကျဆင်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ဆင်းသွားပြီးသင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုနှင်ထုတ်ရမည်. မျှော်လင့်ပါတယ်ယခုအားဖြင့်သင်ကစားသမားအပေါ်ကောင်းတစ် ဦး ကိုဖတ်ကြပါပြီ, သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေ, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို. သို့သော်, it may be important to know that poker players often switch modes when it comes down to heads up play. A poker players heads up play may be completely different than their regular play. Here are some tips to help you improve your heads up Texas Hold’em poker strategy. Tip#1 ‘ An Ace in the Hole The #1 rule of heads up poker play is that when you have an ace asahole card you will usually be inadominant position pre flop. You should then raise/re-raise strong to see what the opponent’s reaction will be. Often times an opponent will fold (depending on the specific style of the poker player) for fear of the ace orapocket pair. Sometimes you may get called but remember, in heads up poker players haveatendency to make loose calls. Odds are you will still be inadominant position. သိကောင်းစရာ #2 ‘ Lower Your Expectations While playing heads up Texas Hold’em poker, chances are that you cannot afford to wait onagood hand. A quality hand in heads up poker is not the same as when playing withabigger group. You may have to settle with J-6 offsuit and just see what happens. The odds are that many times your opponent will haveabad looking hand as well. သိကောင်းစရာ #3 ‘ Try To Pick Up A Betting Pattern Many poker players have an extremely difficult time playing heads up. Some collapse under the pressure and others become painstakingly obvious in how they bet in heads up. Make sure you keep an eye on your opponents betting habits. Every now and then you may want to callahand that you know your probably beat in just to see what the opponent has. If you can pick up an opponents betting habits it’s almost as if they are showing you their hands. သိကောင်းစရာ #4 ‘ Mix Up Your Play Even if you are not getting the best of cards you must always try to mix up your play to throw your opponent off your scent. Raise with 9-4 suited. Call with A-3 offsuit. This way your opponent cannot pick upagood betting pattern from you. Many poker players are not great when it comes to heads up play. By throwing your opponent off your scent it possible that he/she will be enticed into makingacareless all-in call. All it takes is one big mistake in heads up play and you’ll have your opponent right where you want them. သိကောင်းစရာ #5 ‘ Don’t Over Do the ‘All-In’ Call Please do not go over board going all-in. This is like leaving your hand up to fate. There is some luck involved in poker but you don’t want to just get by on being lucky. အပြင်, doing this isaclear give away that you may be less advanced andaveteran will wait for their chance and BURRY you. Mix up your play, raises, calls and folds, and in the end the better player usually wins out.5သင်၏ ဦး ခေါင်းမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Poker Play ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်းများ